Sheekada filimka Sketch: Vikram ma bad baadin karo filimkaan sheekadiisa liidato | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Sketch: Vikram ma bad baadin karo filimkaan sheekadiisa liidato
Sheekada filimka Sketch: Vikram ma bad baadin karo filimkaan sheekadiisa liidato
Tamil Superstar Vikram wuxuu la yimid filim lagu magacaabo Sketch oo maanta tiyaatarada la saaray waana filim Action ah oo ay la jileyso atirishada Tamannah Bhatia.
Jilayaaasha: Vikram, Tamannaah Bhatia, Soori, Harish Peradi, Radha Ravi and Ravi Kishan
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 15-daqiiqo
Qiimeynta sheekadiisa: 2/5
Fariinta Filimka Sketch Oo Kooban: Jeeva aka Sketch (Vikram) waa wiil ku nool Waqooyiga Madras kana tirsan koox dhalinyaro ah oo ka shaqeeyaan garaash uu iska leeyahay Settu (Hareesh Peradi).
Sketch (Vikram) shaqadiisa waxay tahay dadka deenta baabuurada lagu siiyo hadii ay lacagta ku bixin waayaan waqtigii loo qabtay inuu baabuurta xoog kaga soo celiyo waxaana la shaqeeyaan sedex saaxiib oo uu ku kalsoon yahay.
Sketch (Vikram) wuxuu leeyahay qoys aad u jecel balse waqtigiisa garaashka ayuu ku bixiyaa wuxuuna jecel u qaadaa Ammu (Tamannaah) xili uu ku guda jiro gaari soo celin inkastoo fagta hore Ammu (Tamannaah) ka heleyn Sketch hadane gadaal ayay ka ogaanee inuu qof fiican yahay.
Sketch noloshiisa waxay is badalee ama halis dhexda ka galee marka uu dagaal galo burcadka weyn ee awooda badan Royapuram Kumar (Baburaj) weliba saaxiibadiisa ayuu ka qaarjinaa.
Sketch wuxuu halgan u galaa qaybha dambe filimkaan dilka saaxiibadiisa cida ka dambeyso sidii uu ku ogaan lahaa iyo sida uu kaga taqalusi lahaa Royapuram Kumar (Baburaj).
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Sketch: Director Vijay Chandar wuxuu doortay sheeko in ka badan boqol jeer horey loo sameeyay hadana isku xir fiican uma yeelin kaliya Vikram ayaa filimkaan doorkiisa la tayeeyay laakiin wax kale oo cusub kuma arki doontid.
Bandhiga Jilaayaasha: Waan ka xunahay Vikram wuxuu doortay Sketch oo si sahlan ku noqday mid ka mid ah aflaantiisa ugu liito ee uu ebid sameeyo maqaamka uu taagan yahay iyo inuu yahay Mr. Perfectionist of Kollywood ama Tamil-ka atooraha Aamir Khan ka ah fariimo cusub dooran jiray inuu u laabtay sheekooyin waa hore laga soo gudbay!
Tamannah Bhatia door adag kuma lahan filimkaan muuqaal ahaana wey ku yar tahay sidoo kalena Sketch uma qalmo maqaam ahaan inay kasoo muuqato xidigtaan!
Gunaanad: Sketch ka daawo Action-mada wacan Vikram sameenayo waana ka xunahay Vikram oo in ka badan 20-sano fanka Koonfur Hindiya ku jiro inuu doorto fariin raqiis ah asigoo ahaan jiray aabaha Kollywood-ka ee fariimaha casriga ah ama cusub bilaabo!
Waxaa Aqrisay 595